Izincwadi zomlando waseSpain, ukukhethwa kwezihloko ezithandwa kakhulu | Izincwadi Zamanje
Izincwadi zomlando zaseSpain
UJuan Ortiz | | Abalobi, Imicimbi, Amabhuku, eziningana
Lapho umsebenzisi okhuluma ngeSpanishi okhuluma iSpanishi ehlola ukuseshwa "kwezincwadi zomlando zaseSpain", inethiwekhi inikeza umsebenzi wababhali abanjengoPérez Reverte, Eslava Galán noma uFernández Álvarez, phakathi kwabanye. Ngakho-ke, ukuba nohlu lwezincwadi eziningi, kuhle ukuba nemikhondo ethile ongayikhetha ngokufanele, ngoba lezi zinhlobo zemibhalo zisukela komlando kuze kube manje.
Ngakolunye uhlangothi, kunezincwadi zomlando ezigxila ezikhathini ezithile. Injalo-ke le ndaba ye- Iziqephu zikazwelonke nguBenito Pérez Galdós, ogxile kakhulu ezenzakalweni zekhulu le-XNUMX. Lo mbhalo wethula ukukhethwa kwemibhalo ngobubanzi obukhulu bokulandelana futhi okuhambisana nokwethulwa ngaphezulu Okwakamuva
1 ISpain. i-biography yesizwe (2010), ngu-Manuel Fernández Álvarez
1.1 Izintshisakalo ngale ncwadi
2 Lokho bekungekho encwadini yami emlandweni waseSpain (2016), nguFrancisco García del Junco
3 Umlando omfushane weSpain (2017), nguGarcía de Cortázar noGonzález Vesga
3.1 Izindaba zomlando
4 Umlando waseSpain Utshelwe Abangabaza (2017), nguJuan Eslava Galán
5 Umlando waseSpain (2019), ngu-Arturo Pérez Reverte
5.1 Isitayela nenhloso
6 Ezinye izihloko ezizobhekwa
ISpain. umlando wesizwe (2010), nguManuel Fernández Álvarez
Umbhali, ofaneleke njengomunye wababhali-mlando abaphambili baseSpain benkathi yamanje, uqinisekisa isimo sakhe ngalo msebenzi ophelele womlando. I-Spain biography yesizwe Kubandakanya ukubuyekezwa okuningiliziwe kwezenzakalo zomlando ezinqume kakhulu nezingqubuzanayo kwenzeka kahle ngekhulu lama-XNUMX.
Izintshisakalo ngale ncwadi
Yize ungumbhalo oqinile futhi ophelele oqala ngendoda endala yeNhlonhlo Yase-Iberia, akuyona incwadi ende yomlando. Empeleni, umbhali uyadlula futhi abukeze ngokuningiliziwe izehlakalo ezinkulu zomlando, kepha ngaphandle kokuma okungaphezulu kokudingekayo. Ngenxa yalokho, le ncwadi ingasebenza kakhulu "kumqali" emlandweni waseSpain njengongoti.
Ngakolunye uhlangothi, umfundi uzothola - njengoba isihloko sikhombisa - ukubuyekezwa kwempilo ende yezwe. Okunye okumangazayo yindlela emnandi eyenziwe ezungeze iSpain kaFranco noma abaculi nababhali bayo abakhulu. Lokho kusho ukuthi umbhali ubonakala engaphuthelwa yimininingwane yakho konke okwenzekile empilweni yamasiko eSpain, ngaphandle kokuthi kube ukufunda okumangazayo.
ISpain. I-Biography ...
Lokho bekungekho encwadini yami yomlando waseSpain (2016), nguFrancisco García del Junco
Kungumsebenzi onezici ezicacile zobuzwe obuzinikele ekuhlaziyeni izindima ezingaziwa kangako emlandweni waseSpain. Ngale njongo, umbhali wakhiqiza isiqeshana esihlelwe saba izahluko eziyishumi nantathu okuqala ngokuvikela iCagagena de Indias eholwa nguBlas de Lezo. Ngokusho kukaGarcía del Junco, "ukunqotshwa kwemikhumbi emikhulu kunayo yonke eNgilandi."
Lo mncintiswano ubungashiwo kangako ngemibhalo yendabuko, kepha phakathi nenkulungwane entsha yeminyaka kube nokubuyekezwa okuhle ngale ndaba. Ngokolunye uhlangothi, Le ncwadi yokuzijabulisa kaGarcía del Junco ihlolisisa imicimbi ebaluleke kakhulu, phakathi kwabo:
I-Royal Vaccine Philanthropic Expedition.
Ukuhlola okuholwa nguManuel Iradier emahlathini aseGulf of Guinea.
UPedro Páez, "umSpain owathola imithombo yeNayile" (le feat ingenye yezinto ezingaziwa kakhulu emphakathini waseSpain kuze kube manje).
Ukuthula Kwezinkomo ezintathu.
Ukuhlaselwa kwamaViking phakathi neNkathi Ephakathi.
Lokho Kwakungekho Encwadini Yami ...
Umlando omfushane ngeSpain (2017), nguGarcía de Cortázar noGonzález Vesga
Le ncwadi yaqala ukushicilelwa ngo-1993; kusukela lapho iye yabizwa ngokushicilelwa okuningi nokubuyekezwa kwakamuva. Ngaphezu kwalokho, inempumelelo emangalisayo yokuhlela; Ihunyushelwe ezilimini eziningana futhi ukuthandwa kwayo kweqa imingcele yaseSpain. Lokhu kungenxa yokuthi - yize kunamakhasi acishe abe yinkulungwane - kufinyelela ukunemba okungajwayelekile nenhloso emibhalweni eminingi yomlando.
Ukuphindwaphindwa okuningi kwalesi sihloko kukwenze kwaba nokwenzeka ukucwenga okuqukethwe kwaso ngendlela exakile. Ikhwalithi ebaluleke kakhulu yalo mlando waseSpain yilokho ikhuluma ngazo zonke izinkathi zezwe laseYurophu ngokunemba nangokuhlanganisa. Ngokunjalo, ukulandiswa kwemicimbi kumnandi kakhulu futhi kuyenga umfundi ukuthi azi ifa lamasiko aseSpain.
Nokho, okuqukethwe Umlando omfushane ngeSpain uthole ukugxekwa ezinye izazi-mlando, abasola ukucwasana okungadingekile kwezepolitiki nemibono yabalobi bayo. Kodwa-ke, ukuqashelwa njengombhalo wamanje akunakuphikwa kumphakathi onentshisekelo yokwazi ukuthi isizwe saseSpain silungiselelwe kanjani.
Umlando omfushane ngeSpain
Umlando waseSpain utshele abagxeki (2017), nguJuan Eslava Galán
U-Eslava Galán ukwenze kwacaca kaninginingi inhloso yokushicilelwa kwakhe: “ukuxhumana ngomlando waseSpain ngendlela elula”. Ngokombono wombhali, okuhambisana nokuvezwa kwendaba kunokufuna okwenziwa ngokusemthethweni. Kungani? Yebo, umbhali uyaqinisekisa ukuthi lobu bunzima bezemfundo buvame ukuchithwa yincazelo.
Umphumela ube ngumbhalo onconyelwe kakhulu wabafundi abangajwayelekile bezihloko ezihlobene nomlando waseSpain. Ngendlela efanayo, le ncwadi akufanele ididaniswe nokuhlaziywa komlando. Ngokuphambene nalokho, ukulandisa okuphawuliwe lokho kumema umfundi ukuthi angathembi.
U-Eslava Galán uchaze uhlobo lokushicilelwa kwakhe ngegama elithi "Angisho ukuthi liyiqiniso, lilungile futhi linobubele, ngoba ayikho indaba". Ngakho-ke, Akuwona umbhalo ohlukaniswa nesifiso sawo sokuhlolisisa umlando. Eqinisweni, kukhombisa umbono ohlekisayo wezenzakalo ukusondeza umlando waseSpain kulabo abangakholelwa kuwo.
Ngamanye amagama, Akuyona incwadi ukukholisa, kepha kuchaza labo abangabazayo ukuthi izehlakalo ezithile zenzeka kanjani nokuthi kungani zenzeka. Ngakho-ke, umfundi ubhekene nokuphikisana okuhluke kakhulu kwemibhalo eminingi yomlando. Ngalo mqondo, u-Eslava Galán uthe "uma umfundi efunda okuthile, kuzobhekwa njengokukhokhelwa kahle."
Umlando waseSpain ...
Umlando waseSpain (2019), ngu-Arturo Pérez Reverte
Le ncwadi - ebhalwe omunye wabacwaningi abaziwa kakhulu eSpain - indatshana ekhuluma ngezinto ezehlukene ezehlukile zesizwe sase-Iberia. Lapho, UPerez Reverte ihlola izehlakalo ezisukela ekuthomeni kwesintu, kuye ngeNkathi Ephakathi kuya kwikhulu lama-XNUMX.
Kumele kuqashelwe ukuthi Umlando waseSpain akuwona neze umsebenzi wokufunda. Noma, ngokusobala, umbhali uchaza okuqukethwe okuzinikele kakhulu kulokho iSpain okuyikho namuhla. Ngakho-ke, umbhali ukwazile ukukhombisa ngobuciko ubuhlakani, i-gentilicio nokuzizwa kweSpanish.
Umlando waseSpain Kuwumbhalo omnandi ukuwufunda, onentshisekelo kuwo, ukude nomfundaze womlando futhi, kwesinye isikhathi, unethoni ehlekisayo nehlekisayo. Okwakho, UPérez Reverte ubuyekeza ifayela le- umlando waseSpain ngokunaka imininingwane ye-anecdotal, ukusebenzisa izinkulumo ezihlabayo noma ezihlekisayo ukubamba umbukeli ngobuqili.
Ekugcineni, umfundi nguyena onquma ukuthi inhloso yencwadi iyini, kepha umbhali unombono oyingqayizivele ngayo. Ngokuqondile, uthi uyibhalele ukuthi "nijabule, nifunde futhi nijabulele, okuyibhaxa lokubheka emuva kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube manje". Sibonwe kanjena, isimemo sihluke ngokuphelele kokujwayelekile, ngoba sihlose ukutadisha umlando waseSpain ngenhloso yokudlala.
Ezinye izihloko ezizobhekwa
Qonda umlando weSpain (2011), nguJoseph Pérez.
Umlando ophelele waseSpain (2013) nguRicardo de la Cierva.
Umlando wesimanje waseSpain (2017), nguJordi Canal.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Izincwadi zomlando zaseSpain
IToni Hill. Ingxoxo nombhali weThe Dark Goodbye nguTeresa Lanza
Izincwadi zokuzisiza ezihamba phambili